Date My Pet » Ahoana no Isorohako ny Conversation Maty Zone sy Hitandrina avy namely Out?
Last nohavaozina: Nov. 26 2020 | 3 min namaky
“I atao niraikitra niezaka hanomboka ny resaka. Fahanginana tanteraka nandroaka ahy adala. Ny ranomandry mpandika izay lazaiko matetika mifarana ny ho zavatra tena adala.” – Anonymous
Ny marina Valiny
Dia efa tonga any alohan'ny rehetra – izany fahanginana hafahafa izay mitranga rehefa nifanena tamin'ny olona efa, ary tsy hoe izay holazaina…
Sary fotsiny izany ao an-tsainao… Efa nifanena tamin'ny olona vaovao sy kely ianao natoky tena loatra ny hoe mba ho Tsara avy Hatrany fahatsapana. Angamba ianao saro-kenatra kely be dia be sy natahotra! Mety reraka fotsiny ianao amin'ny andro lava be tao amin'ny birao. Na inona na inona, Foana tanteraka ianao, ary tsy mieritreritra ny zavatra manan-tsaina iray hoe. Vao mainka, ny daty dia tsy hoe na inona na inona na.
Dia ny “DATY MATY VOALOHANY ZONE!” – Vonjeo! Olona iray miteny… na inona na inona… Quick!
Dia ny milina fandefasana fax mahay maneho hevitra bebe kokoa ianao?
Aza, ny milina fandefasana fax Manana niorina fotsiny harahina mihitsy ny daty voalohany. Eritrereto indray ilay fotoana farany faxed antontan-taratasy ny olona iray. Ny milina fandefasana fax mahatonga ny fifandraisana amin'ny hafa Fax milina, ary dia mihainoa isan-karazany gibberish teo anoloan'ny tahirin-kevitra manomboka mandeha amin 'ny alalan.
Moa ve ianao hoe inona no izany ny rehetra? Tsara, Fax milina roa ireo ankapobeny hoe: Miarahaba sy mametraka manomana ny mpamaky ny resaka, ny fifadian-kanina izy ireo dia handeha ho any miresaka, fiteny inona no handeha izy ireo hampiasa, ary mandra-pahoviana izy ireo dia handeha ho any hiresaka. Tsy tena mitovy amin'ny minitra vitsivitsy voalohany amin'ny daty.
Ianao mahafantatra olona vaovao
Ianao hatao ny teny ampiasaina sy ny fomba fiteny vatana
Ianao nahafantatra avy ny vazivazy (izay mety amin'ny sy ho azy hanova ny feo tanteraka ny resaka)
Miezaka ianao mba hamantarana ny fikasany. Moa ve izy ireo tena namana? Afaka matoky azy ireo ianao? Anao ve ny hoe na inona na inona ratsy?
Tena ve ianao, tena toa azy ireo?
Fotsiny ianao mila fampiharana manokana ny daty voalohany fifanarahana.
Zava-dehibe ny mahatsiaro fa izay voalaza nandritra ireo minitra vitsivitsy voalohany no tsy tena resaka. Ny zava-dehibe dia ny hanorina izany voalohany, namana fifandraisana amin'ny hafa.
Ireto misy fifandraisana 101 toro-hevitra fa hatao nanomboka tamin'ny tongony ankavanana.
Aoka ianao ho sariaka ary tena tsara
Ampio ny hafa ny fihetseham-pon'ny olona
Tena mihaino azy ireo – mijery azy ireo eo imason'ny (Fantatro fa misy olona mafy nefa afaka manao izany.)
Tsara izany, fa inona no lazaiko? Misy ranomandry am-bifotsy mpandika ho an'ny fotoana rehetra?
Tsy marina, fa misy hatrany zavatra azonao hoe mba hanamaivanana ny fahanginana hafahafa.
Ireo hevitra ireo dia tokony hiasa amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra daty voalohany.
Manontany momba ny andro… Nanao ahoana izy tao?
Manontany momba ny asa… Inona no ataony? Ahoana no tiany izany?
Manontany ny biby fiompy sy ny ankizy. Firy? Anarana? Taona?
Ananany na inona na inona izay tiany hatao rehefa tsy miasa ianao? Fialam-boly? Sports? Sns.
Fantatro fa ireo feo levitra, fa ny hevitra ambadiky ireo fanontaniana tsotra dia ny mahita zavatra izay samy hankafy sy miresaka an'izany. Enga anie, ho hitanao fa misy zavatra itovizantsika.
Na izany aza, dia zava-dehibe loatra ny tsy mafy loatra manokana . Liana, ary manontany fanontaniana dia manadihady bebe kokoa, fa aza intrusive loatra. Tsy tianao ny hampitahorana ny olona hafa eny.
Koa nahoana no mandry ny amin'ny daty voalohany? Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, fa tsy mahazo aina fahanginana (izay matetika miteraka tahotra ho an'ny sasany), Mifototra amin'ny tahotra. Eny, tahotra…
Tahotra izay ianao hoe zavatra tena adala
Aza matahotra ianao fa manana na inona na inona amin'ny iombonana
Matahotra fa ilay olona tsy tia anao
Tahotra ny ho nataony teo no ho eo mba hanao
Ahoana no handresenao ny tahotra?
Na dia tsy misy raikipohy mahagaga izay hamonjy anareo ny fotoana, misy ny vahaolana ho an'ny zava-manahirana. Makà fotoana kely eo anoloan'ny daty ho tonga amin'ny vitsivitsy fanontaniana tsotra sy ankapobeny fa afaka mangataka na compliments fa mety ho afaka manao. Soraty eo amin'ny taratasy kely. Tandremo ny taratasy ao amin'ny kitapom-batsy, na kitapom-bola. Tsy voatery hijery izany – ny fananana izany aminareo, ary mahafantatra fa ny any dia hanampy anao hahatsiaro.
Raha toa ianao mametraka tena tafahitsoka, Mitady fialan-tsiny ny tenanao ho amin'ny efitrano fidiovana izy, ary hijery ny hanambaka taratasy. Rehefa mody any, dia ho azo antoka fa hampiaiky volana ny daty amin'ny fanontaniana voahevitra tsara sy be fiahiana.